Mahazo Ny Medaly Volamenany Voalohany I Arzantina Amin’ny Lalao Olaimpika 2012 Ao Londona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2012 2:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, русский, বাংলা, Español
Nankalaza ny medaly volamenany voalohany indrindra nandritra ny Lalao Olaimpika tao Londona i Arzantina ny Zoma 10 Aogositra; Sebastian Crismanich [es], teraka tany amin'ny Faritanin'i Corrientes, nifaninana tamin'ny sokajy 😯 kg tamin'ny Taekwondo, nandresy ny solontenan'i Espaina Nicolás Garcia Hamme 1-0.
Any Arzantina, lasa fotokevitra iray malaza ny tenifototra #Crismanich [es], ary naneho ny hafaliany sy ny fahagagany ireo mpampiasa tamin'ity zava-bita tanatinà fanatanjahantena ity izay tsy dia malaza tahaka ireo fanatanjahantena hafa, tahaka ny lalao baolina kitra. Anivon'ireo bitsika maro, manoratra i Nico Fernandez (@nicolinoribas) [es]:
@nicolinoribas: Amin'izao fotoana izao dia lasa mpankafy ny Taekwondo ny rehetra. Ie marina izany. 12 ora lasa izay, tsy nisy nahafantatra fa nandray anjara i #Crismanich. Mpihatsaravelatsihy.
Sahala amin'izany, manome tsiny ireo mpanao gazety noho ny tsy fahampian'ny fandrakofana i Jose (@vjosesc) [es]:
@vjosesc: Roa andro lasa izay tsy nahalala isika fa nanana fahafahana hitango medaly volamena i #Crismanich. Tsy nahomby ireo mpanao gazety nandrakotra ny #JJOO [“Lalao Olaimpika”].
Na izany aza anefa, maro amin'ireo mpampiasa twitter no maneho ny hafaliany manoloana ny zava-bitan'i Crismanich, tahaka an'i Juancho (@kiddo72) [es], Perickles (@peripepe) [es] sy Abel Racedo (@AbelRacedo) [es], ankoatra ireo hafa.
Mamintina [es] ity fahombiazana ity sy ny tantaran'ireo medaly volamena azon'i Arzantina ny masoivoho mpampiely vaovao Arzantina Telam:
Ny hajiantsary dia avy amin'ny pejy Faceebook-n'i Sebastian Crismanich's [es].